Haweenay qoorta looga jarey Sacuudiga oo ka careysiisey Indonesia (Video+Sawiro) – SBC
Haweenay qoorta looga jarey Sacuudiga oo ka careysiisey Indonesia (Video+Sawiro)
Haweenay u dhalatey wadanka Indonesia oo dhawaan xukun qoor goyn ah loogu geystey wadanka Sacuudiga ayaa caro xoogan ku abuurtey dadka & xukuumada Indonisia taasi oo keentey in xukuumada Jakarta ay u yeerato safiirkeedii ka joogay dalka Sacuudiga.
Haweenayda qoorta laga jarey oo lagu magacaabo Ruyati binti Satubi Saruna, 54ayaa xukun dil ah oo goor goyn ah lagu sameeyey ka dib markii lagu eedeeyey inay dishay xaaska nin ay u shaqeynaysay.
Filim muuqaal ah oo laga baahiyey telefishinada qaar gaar ahaan kan dalka Indonisai ayaa laga daawaday haweenayda oo meel fagaare ah unuunka looga jareyo, iyadoo arintan ay si weyn uga caroodeen dadka reer Indonisa.
Sidoo kale xukuumada Indonisia ayaa ka carootey dawlada Sacuudiga oo diidey in ay ku soo wareejiso meydka haweenada qoorta laga jaray.
Link Video hoose ka daawo haweenaydan oo lagu qaadayo xukun oo seef aad u af badan surka looga jarayo. Digniin muuqaal naxdin leh.
Agoosto 26, 2011 at 10:33 pm
marka hore waxaana halkaan ka salamayaa dhamaan shaqalaha allsbc website anigoo jooga gobolka minnesota oo ka dirsan mareykanka ilahaya waxaan oga barayaa inuu ka warbiyo janada fardowsa intaa kadib waxaad aad iyo aad luga xumaydo in qof muslim ah sidaas looga galo haddii uu qofku oo qof dilo waa in sii wanagsan loo dilo balse miidi sidaas loogu galo sawir laga qaado asagoo si xun loo dilo saudiga sidaas diinka kama ah ee waa dad aad iyo aad uu xun somalida ayeey maalin kasta sidaas uu galan marka ilahay ayaa la xisaabtamay aad iyo aad ayaan ugu xumahay run ahaantii ma sii fiirin sawirda waa adkesan waayay ilahay ha uu naxariisto